Sidee ku timi guusha maanta ee dacwada badda - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Sidee ku timi guusha maanta ee dacwada badda
Kadib burburkii dalka waxa Kiiniya iyo wadamada jaarku aad uga faaiideysteen dhaqaale badana ka soo galay hay’adaha ku shaqaysta magaca dalkeena iyo masaakiinta qaxday. Dawlad kastana waxay ka gashay meeshii ay is lahayd waa qabsan kartaa.
Kaluumaysatada Kiiniya iyo maraakiibta ajaanibta ayaa Kiiniya ku siisay baddeena laysano ay kaga kaluumaystaan. Waxase la ogaaday inay badda isa siisay. Muddo kadib waxa soo baxday in xadka baddaha la cusboonaysiinayo qaasatan inta dawladu xaqqa u leedahay dhaqaale ahaan.
”Waana halka Kiiniya lagu qabtey ayuu yiri Cali Calasow. Waxa arintan qarxiyay aqoonyahano Somaliyeed oo ogaaday in Kiiniya damacday inay badda si sharci ah u sheegato.
Waxay markiiba bilowday inay maamulkii Shariif sh Axmed oo fowdo ahaa ay iibsato oo heshiis beena la gasho, waxa RABBI waafajiyay aqoonyahanada qurbaha halka Kiiniya u socoto.
Waxa la kiciyay barlamaanka oo iska ahaa dhoohane, waxayna ku guulaysteen inay heshiiskii Shariif sh Axmed maamulkiisu saxiixay tirtiraan, kadibna hadday ka fursan weydo la geeyo maxkamad caalami ah.
Waxayna fikirkaa ku qasbeen maamulkii ka dambeeyay ee Xasan sheekh ilaa laga soo gaaro dawlada hadda jirta. Kiiniya kadib waxay bilowday iany dawlada madaxweyne Farmaajo gilgisho saartana culeyskii ugu xumaa ayadoo adeegsanaysa kooxda XALANE si dacwada badda looga soo celioyo maxkamada.
”Waxa naloo gaaray malaayiin doolar inaan dacwada ka soo celino Hayg ayuu yiri madaxweyne Farmaajo oo arintan ka hadlaayay sanadkan horaantiisii.
Waxa u dambeeyay ay Kiiniya iyo xulafadeeda soo qaadeen taas oo ay u yeereen Rooble. ”Markii Rooble la geeyay London waxa keliya ee loogu yeeray waxay ahayd inuu dacwada soo celiyo kharashkiisana qaato waxase uu ogaaday in la daldalayo hadduu falkaas ku kaco ayuu yiri Cali Calasow.
Si kastaba ha ahaatee guushan ayaa ku soo beegantay xilli dalku doorasho gaabsi ah galayo gaabsigaasna lagu eedaynayo kooxda XALANE oo Kiiniya ku jirto waana halka Kiiniya ku raadinayso inay ka hesho horgale u soo baxa.